ဖိုင် extension များကိုမည်သို့ပြရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
OS X ဖိုင်များ၏ extension ကိုဘယ်လိုပြမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်များ၏တိုးချဲ့မှုများကကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားများကိုခွင့်ပြုသည်ကိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည် မည်သည့် application များဖြင့်ပြန်ဖွင့်နိုင်သည်ကိုသိပါ။ OS ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့် Windows ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ဖိုင်တစ်ခုစီ၏မည်သည့် extension ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ၊ ၎င်းကို CMD + i ကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိအားပေးသည်။ သို့သော်ဤဖြစ်စဉ်သည်ရှည်လျားပြီးငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ပြသထားသည့်သမ်းနေးပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်ပုံစံကိုသိရန်မကူညီသနည်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားသရွေ့၎င်းကိုပြသလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ဖိုင်များ၏တိုးချဲ့မှုကိုကျွန်ုပ်တို့သိလျှင်၊ ဤသည်သည်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားလိမ့်မယ် ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမျှဝေပါက။ ဥပမာအားဖြင့် Photoshop ဖိုင်များ၏တိုးချဲ့မှုသည် .PSD၊ Microsoft Word ဖိုင်များ၏ .DOCX၊ PowerPoint ဖိုင်များ .PPTX ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့လုံးဖြစ်နိုင်သည်။
iWork အစုံ ၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးစကားလုံးပရိုဆက်ဆာနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပြောဆိုချက်အတိအကျမဟုတ်ပါ နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် Microsoft Office ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အကယ်၍ iWork တွင်ဖိုင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးလျှင်၊ Office က၎င်းကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ ၎င်းသည်အခြားသုံးစွဲသူများနှင့်လိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုကိုယခင်ကစစ်ဆေးခဲ့သည့်အလားအချိန်နှစ်ဆပိုမြန်စေသည်။
OS X တွင် extensions များကိုပြပါ
ပထမ ဦး စွာကျွန်တော် Finder ကိုဖွင့်ပြီးသွားပါ ဦးစားပေး.
Preferences အတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Advanced အမည်ဖြင့်နောက်ဆုံး tab ကိုသွားပြီးအကွက်ကိုစစ်ဆေးပါ ဖိုင်အမည် extension ကိုပြပါ.
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၌ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားသည့်ဖိုင်များအားလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာ extension နှင့်အတူပြလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့် application နှင့်မည်သည့် application ကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ သဟဇာတပြproblemsနာများမရှိဘဲနှင့်ပြသလိမ့်မည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » OS X ဖိုင်များ၏ extension ကိုဘယ်လိုပြမလဲ
Airmail 2.5.2 ကို Mac App Store တွင်ရနိုင်သည်
ဒီမှာငါတို့မှာ Magic Mouse2အသစ်၊ Magic Trackpad2နှင့် Magic Keyboard အသစ်ရှိသည်